Antrendry (voany) - Wikipedia
Ny antrendry dia voankazo avy amin' ny zavamaniry mitovy anarana aminy atao amin' ny anarana ara-tsiansa hoe Phœnix dactylifera, izay volena manerana izao tontolo izao any amin’ ireo faritra manana toetany mafana sy maina.
Ny fitambaran’ ny voan’ ny fototr’ antrendry iray mandritra ny iray taona dia mety mahatratra 270 kg. Amin’ ny fahavalo taonany ny antrendry dia manomboka misy voany. Ny antrendry vavy iray dia mety ahitana tangorom-boany maro ary ny tsirairay amin' izany dia ahitana voany miisa 200 hatramin’ ny 1 000, izay mety milanja hatrany amin’ ny 12 kg.
Ny voan’ antrendry dia famenon-tsakafo mahavelona any amin’ ny faritr’ i Afrika Avaratra sy any Iràna ary any Arabia. Misy siramamy ny 58 % ary lipida ny 2 %n’ ny voan’ antrendry sady ahitana prôteinina sy sira mineraly koa. Ny antrendry mamy dia volena any India mba hahazoana ranony izay andrahoina mba hahazoana siramamy; raha tsy andrahoina izany dia ahazoana zava-pisotro na divay na toaka.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Antrendry_(voany)&oldid=999054"
Voaova farany tamin'ny 18 Desambra 2020 amin'ny 09:47 ity pejy ity.